အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဂျာမနီနိုင်ငံ သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Created By : 07-Aug-2018	Published In: လက်ခံတွေ့ဆုံမှု Hits: 96
မြန်မာနိုင်ငံ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်သည် ဂျာမနီနိုင်ငံ သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel နှင့်အဖွဲ့အား ၆-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ၁၄:ဝ၀ နာရီအချိန်က နေပြည်တော်ရှိ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌမှ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် (KPK) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Created By : 06-Aug-2018	Published In: လက်ခံတွေ့ဆုံမှု Hits: 77
မြန်မာနိုင်ငံ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်သည် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ၊ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်(Corruption Eradication Commission- KPK) ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Laode Muhammad Syarif နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီက နေပြည်တော်ရှိ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံး၊ ဧည့်ခန်းမတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပကုန်သည်ကြီးများအသင်း (EuroCham Myanmar)မှ တာဝန်ရှိသူများကို ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌမှ လက်ခံတွေ့ဆုံ
Created By : 25-Jul-2018	Published In: လက်ခံတွေ့ဆုံမှု Hits: 95
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်(ACC) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပကုန်သည်ကြီးများအသင်း (EuroCham Myanmar)မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး Mr. Marc de la Fouchardiere နှင့်အဖွဲ့အား ၂၅-၇-၂၀၁၈ ရက်နေ့ မနက်(၁၀၀၀)နာရီက ကော်မရှင်ရုံးတွင် လက်ခံ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ MATA အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Created By : 11-Jul-2018	Published In: လက်ခံတွေ့ဆုံမှု Hits: 89
မြန်မာနိုင်ငံ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ပွင့်လင်း မြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာ အရပ်ဘက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ (Myanmar Alliance for Transparency and Accountability -MATA) မှ တာဝန်ရှိသူများအား ၁၁-၇-၂၀၁၈ ရက်နေ့ (၁၃၀၀) အချိန်က နေပြည်တော်ရှိ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံးတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။